IZA MARINA MOA ITY JESOSY KRISTY ITY? - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Satria fony mbola tsy hary ny tany sy ny lanitra no efa nohariana izy, dia hoy ny olona sasany hoe: fa angaha izy moa tsy Andriamanitra indray no hoe nohariana? Fa angaha moa zava-boahary indray io fa tsy Andriamanitra no ahoana no misy an‟izany hoe nohariana izany indray Izy? Ka ny hanazava an‟izany misitery rehetra izany no hataontsika manaraka ary dia hofakafakaintsika tsara mihitsy izany.
Voazavantsika tsara mihitsy fa ity boky apokalypsy ity, dia tena tenin‟Andriamanitra izay milaza ny momba an‟i Jesosy Kristy mihitsy. Ka izay fanazavana rehetra momba ny soratra masina na izay olona rehetra manompo an‟Andriamanitra tokana mpahary ny lanitra sy ny tany, ka na inona na inona hiantsoan‟ny firenena Azy araka ny fiteniny sy ny foko nihaviany, dia iantefan‟ity hafatra maika dia maika ity. Mazava ho azy fa hiraisan‟ny finoana rehetra ny fisian‟ny Andriamanitra tokana na inona ny fiantsoana Azy na inona na inona ilazana Azy, dia misy Andriamanitra tokana mpahary ny lanitra sy ny tany. Io Andriamanitra tokana io no tompon‟ny fanambarana, ary ny nampitondraina ny hafatra dia misy mpaminany maro ato amin‟ny baiboly, fa ity hafatra ity kosa dia tsy nomena an-dri Abrahama na ry Jakoba, na ry Mosesy, na ry Daniela, na ry Isaia, na ry Ezekiela, na ry Mohamady, fa i Jesosy Kristy no nomena ity apokalypsy ity, izay hafatra avy amin‟Andriamanitra.
Eto amin‟ny fivavahana hafa sy ny finoana hafa ivelan‟ny kristiana sy ato anatin‟ny kristiana, dia eto amin‟ity Kristy ity no tena misy olana. Ny tena olana eo amin‟ny kristiana dia ny hoe: ahoana ny anavahana ny hoe, iza ilay Jesosy Kristy sandoka. Fa ny fivavahana hafa ivelan‟ny kristiana tahaka ny finoana Koja na Borah, na Siita na Sunita na Indou, na Boudiste, sns izay tsy manaiky na tsy mino an‟ity Kristy ity, indrindra fa ho an‟ny firenena kominista izay tsy mino an‟Andriamanitra dia mba tsara ihany no hanazavana Azy mba ho fantatry ny rehetra, satria ny hafatra dia avy amin‟Andrimanitra, ary ho an‟ny olona rehetra sy ho an‟ny finoana rehetra. Noho izany, raha tsy mazava amin‟ny olona ampitana ny hafatra ny hoe: iza no mpandefa hafatra? dia lasa mifandimpandipatra be ihany ny hafatra, eny fa na dia eo amin‟ny samy kristiana aza dia mila fantarina ihany ny hoe: Iza no ilay Jesosy Kristy mpampita ny hafatra? mba tsy ho Jesosy Kristy sandoka no inoanao.
IZA MARINA ARY ITY JESOSY KRISTY ITY?
Efa niresaka isika teo ambony, ny momba Azy io tamin‟ny resaka nifanaovan‟i Jesosy Kristy tamin‟ireo mpitondra fivavahana tamin‟izany fotoana izany, ka nahatonga ny ady hevitra be, ary nahatonga azy hiresaka hoe: ohatra ny olona miteniteny foana ity Jesosy Kristy, ary sahala amin‟ny olona misy demonia.
Hiverenantsika vetivety izany, sady avy amin‟io ihany koa no itondrantsika ny fanazavana.
Jaona 8:51 – 58 «51 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay.
52 Dia hoy ny Jiosy taminy: Fantatray ankehitriny fa manana demonia Hianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany; nefa hoy Hianao: Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay. 53 Moa Hianao va lehibe noho Abrahama rainay izay efa maty? sady efa maty koa ny mpaminany; manao Anao ho iza moa Hianao?
54 Jesosy namaly hoe: Raha mankalaza ny tenako Aho, dia tsinontsinona ny lazako; ny Raiko, Izay ataonareo fa Andriamanitrareo, Izy no mankalaza Ahy. 55 Tsy fantatrareo Izy, fa Izaho no mahalala Azy; ary raha hoy Izaho: Tsy fantatro Izy, dia mba mpandainga tahaka anareo koa Aho; nefa mahalala Azy Aho ka mitandrina ny teniny. 56 Ravoravo Abrahama rainareo hahita ny androko; ary nahita izy ka faly.
57 Dia hoy ny Jiosy taminy: Tsy mbola dimam-polo taona akory Hianao, ka dia efa nahita an’i Abrahama va?
59 Dia naka vato hitoraka Azy ny olona; fa Jesosy niery ka niala teo an-kianjan’ny tempoly*.»
Rariny sy lojika ihany raha ny olona tamin‟izany vanim-potoana izany, no naka vato ka nitoraka an‟i Jesosy Kristy, satria ny zavatra nolazainy dia ny hoe: “raha mitandrina ny teniko ianareo dia tsy hahita fahafatesana. Dia mbola niteny ihany izy, fa hoe ravovaro i Abrahama hahita ny androko, ary nahita izy ka faly”. Dia gaga ny olona raha naheno izany, satria olona mbola tsy ampy 50 taona tokoa moa ve no miteny zavatra ohatra an‟izany nefa i Abrahama aza efa maty efa ela!!. Fa rehefa niverenana vakiana ilay voasoratra tao amin‟ny ohabolana dia miha-mazava ny zavatra nolazain‟i Jesosy Kristy .
Izany hoe: mbola tsy nisy izany ny tany dia efa nohariana ity olona resahina eto ity, fony tsy mbola nisy izao rehetra izao no efa nisy ity olona resahina eto ity.
Iza moa izany ity olona eto ity? io ilay resahin‟i Jesosy Kristy tao amin‟ny Jaona taty amin‟ny testamenta vaovao efa hitantsika eo ambony io.
Ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra tao aminy dia isan‟ny mpamorona izany i Jesosy Kristy. Izany hoe mpandray anjara fototra tamin‟ny famoronana ny tany sy ny lanitra izany Jesosy Kristy. Ka nahoana ary ny olona no anao hoe mbola tsy feno 50 taona akory ianao dia efa milaza fa efa nisy talohan‟i Abrahama, tamin‟izany fotoana izany?
Satria ity dia misy zavatra tsy azon‟ny olona tamin‟ny andron‟i Jesosy Kristy mihitsy, ary na dia amin‟izao fotoana izao ihany koa aza, dia mbola betsaka koa ny finoana maro sasany no tsy mahazo mihitsy ny hoe: i Jesosy Kristy ity anie no nohariana talohan‟ny ny zavatra rehetra, ary efa nisy Izy hatrany ampiandohana, ary dia izany no mahatonga ny fomba fijerin‟ny olona sasany hoe: “i Jesosy Kristy izany anie dia mpaminany madinika sahala ny sasany ihany e! fa tsy mitovy amin‟ny mpaminany lehibe, tsy misy zavatra mampiavaka azy izany, ary tsy izy no nahariana ny zavatra rehetra izany”. Fa raha mazava tsara ny fipetraky ny fanambaran‟i Jesosy Kristy manao hoe mbola tsy nisy akory anie i Abrahama dia efa teo izy e! Izy no nahariana ny zavatra rehetra, dia mbola velona Izy ary niakatra any an-danitra, ary dia mbola eo foana ihany koa.
Raha mazava tsara ohatra izany ny fipetrany, dia angamba tsy hisy sahy hilaza fa mpaminany kely toy ny mpaminany sasany ihany izy. Mazava ny filazan‟i Jesosy Kristy fa hoe mbola tsy hary i Abrahama dia efa Izy Aho. Dia nilaza ihany koa ny mpanjaka Solomona tamin‟ny ohabolana nosoratany, amin‟ny maha mpaminany azy, dia nahazo izany faminanina izany momba an‟i Jesosy Kristy, fa hoe mbola tsy hary akory ny tany sy ny lanitra dia efa teo Izy.
Ho vakiantsika ary ny Jaona toko voalohany mba hahafahantsika manazava izay tiany ho resahina izany:
Jereo tsara ny teny, Tamin’ny voalohany, ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Raha atao sarisary iray izy ity dia izao no azo ambara:
Ny “triangle” dia Andriamanitra ary ny teny dia atao boribory ary ilay” carré” na efa-joro dia fanahy.
DIA TOY IZAO IZANY NO HILAZANY AZY
Raha namorona ny olombelona Andriamanitra hatrany ampiandohana dia :
Genesisy 1:26–27 «26 Ary Andriamanitra nanao hoe: Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany. 27 Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy. »
Andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Andeha isika,